Gregory Lemarchal, biography, empilweni kanye nomsebenzi ukuthi siyaqhubeka nentshisekelo abantu, ngisho 9 iminyaka ngemva kokufa kwakhe - indoda ebukekayo abasebasha ngezwi emangalisayo, ukumamatheka onamahloni ngamehlo adangele, owanqoba emhlabeni wonke udumo baba ngumkhuba isiko wesimanje. Abantu kukushaqisa ithalente hhayi kuphela yakhe, kodwa futhi ngamandla umoya, ukuba nethemba lokuhle esithathelwanayo nokukholelwa engcono.
Gregory Lemarchal, ogama biography uye washaqeka izigidi zabantu, wazalwa Meyi 13, 1983, edolobheni elincane French La Tronche. Lapho ingane eneminyaka engu-1.5 ubudala, kwatholakala ukuthi une-ezifweni ezimbi zofuzo - cystic fibrosis. Lokhu ukugula okungathí sina oluthinta ukusebenza wamaphaphu, izinso, isibindi, abe okusezingeni eliphezulu lokufa - 60%. abazali Gregory ngokushesha waqala uye wakwenza aphathe ingane, ukunakekela mode oyifunayo zokuphila. Wayevame kwadingeka ukuba ahlale ekhaya amanga embhedeni, yize esengumfana ekhuthele kakhulu. Ezinsukwini inhlalakahle, yena, njengabo bonke abantwana, ube ride bike, wayelithanda ibhola ne-basketball. Eminyakeni 12, wakwazi ukuba abe iqhawe France edwaleni Acrobatic 'n' roll. Kodwa ukugula uvinjelwe play ezemidlalo efanele, kade aba ukwenza inqubo, ukuthatha imithi. Wayengafuni ukuba aphathwe, ukufana nezinye izingane.
abazali Gregory ayefuna ukuba ahileleke umculo - ayenakho ukuzwa kakhulu, kodwa lo mfana asithandayo ezemidlalo kuphela. Lapho Gregory eneminyaka engu-15 ubudala, yena nabazali bakhe baya Karaoke, lapho waphoqwa ukucula njengoba walahlekelwa agumenti. ukusebenza kwakhe uye newozawoza omphakathi ukubona ukusabela kwabantu ezifana izwi lakho, uGregory okokuqala ukucabanga kanzulu ngalokho wayekwazi ukucula. Ngakho Gregory Lemarchal, ogama biography kwenza ube esejika, enquma ukuthi kudingeka aqaphele isipho sakhe. Le nsizwa bebengazama ukuphila, othembela imizwa yabo, futhi wazizwa ukuthi wawuyini umsebenzi wakhe zomculo, uqala abanothando ukuphishekela icala. Waqala ukuthatha izifundo vocal, wayekwenza ubunikazi imishini izwi, iqhaza imincintiswano eziningana, ngezinye izikhathi kwaba nemiphumela emihle kakhulu, wamenywa ukuba imibukiso ehlukahlukene. Kubonakala abalandeli, amakhonsathi lakhe emadolobhaneni yesifundazwe waseFrance Uyi impumelelo. Gregory akha umbono ocacile walokho afuna - ukunikeza abantu injabulo. Ngo-2003, wanikeza indima ethile ebhayisikobho zomculo, kodwa lapho ecula, umculi wenqaba. lwalungolukhulu nzima kuye Kulo nyaka: olujulile ukuvakasha schedule, ukuprakthiza, ukuthatha uhambo, irekhodi, wazizwa ezimbi, enomuzwa wokuthi ayikwazanga eduze kufezeka iphupho.
Ehlobo lika-2004 Gregory ngathola ucingo luvela Uhlelo Star Academy ababemenyelwe audition, wadlula okuyinto ngempumelelo. Ukuze uGregory, ngenxa yokugula kwakhe, wayenze okuthile okuhlukile nemithetho show. Kodwa wazama ukuba zonke alinganayo, wahlanganyela kakhulu, ukudansa, ukubukeza, ne show ngamunye ukuthuthukisa amasu nendlela yakhe. Gregory Lemarchal, biography, izithombe yaqashelwa abantu abaningi kangaka, kwaba star of the show. , Amandla wakhe romantic omuhle, ukulwa umoya futhi ubuhle kakhulu ethandwa kakhulu nomphakathi. Wakhe isidlaliso on the show "The Little Prince" we charm, obuqotho naivete cishe uyingane. Ngo-December 2004, Gregori Lemarshal iwine umbukiso, uvotela ngaphezu kuka-80% izilaleli. On ukusebenza ingoma yokuphetha umculi akakwazanga ukubamba izinyembezi injabulo nesasasa.
Umculi Gregory Lemarchal, biography okuyinto Kuphendula up, izinyanga eziyisithupha waba enkulu. Naphezu kweqiniso lokuthi kulula ukusebenza ngenxa yokugula, amaphesenti angu-20 kuphela odokotela wambiza ukucula hhayi kuphela njengoba isimangaliso. Ngo-2005, wakhulula albhamu yakhe "sengiba a", okuyinto cishe kweso waba-platinum. izwi lakhe kazibuthe, ukubukeka ebukekayo futhi amandla Amazing ohlwitha isilaleli futhi ayizange let go. Gregory Lemarchal, ukukhula, isisindo okungadingi basilalelwe amazinga yobudala bakhe ngenxa yokugula, wabheka umfana ebuthaka, nakuba yayineminyaka engu-engu-21 ubudala. Wabuka endaweni yesehlakalo Iyadabukisa kakhulu futhi abangakwazi ukuzilwela, futhi amandla bobuntu bakhe amazing. Ngo-2006, wathola omunye wemizila ebaluleke kakhulu French umculo imiklomelo - NRJ Umculo Imiklomelo - esigabeni "Ukutholwa Yonyaka." Unika amakhonsathi kuleli zemicimbi yodumo, ugibele nge izinkambo eFrance, eSwitzerland, Belgium, ne full house efanayo. Ngo-2007, wamemezela ukuthi waphoqwa ukuba bathathe ikhefu ngenxa yokugula, kodwa unikeza esinye ekhonsathini, okuyinto lihlabelela nge umculi odumile Helene segara.
Gregory Lemarchal, ogama biography yisibonelo ngokuzimisela okukhulu, waphila ukuphila isikhathi esifushane kodwa elikhanyayo kakhulu. yonke indlela yakhe waphasiswa zokunqoba. Through the ubuhlungu, ehlabelela, kodwa uphethwe wakhe cishe engenakwenzeka ukwenza. Ngesikhathi esifanayo, uGregory akazange bathanda ukukhuluma naye ngokungezwani kwakhe isibindi, naye wayekholelwa ukuthi omunye ingahlala nagokungenamkhawulo, hamba, amaphupho abo futhi enze abantu bajabule. Ngo iculo kwakhe soxhumana zonke ukuba zizenzele umathanda, ukuze sijabulele ukuphila futhi ukuba nithandane. Kwakufanele isebenze kanzima kakhulu: nsuku zonke wayengiphathela ukuthatha amaphilisi 20, thatha esimisweni kinesitherapy (2 ema-awa) futhi ihora elele drip, ubuhlungu cishe ancipha, kodwa Gregory wayengumdlali bajabule. Walwa kuze kube sekugcineni ukuphila, nakuba isikhathi eside wenqaba wamaphaphu ukufakelwa ukuhlinzwa, lokhu kungaphazamisa izwi lakhe. Wakhetha umculo, ngisho noma lokho kusho ukulahlekelwa ukuphila.
Ukuphila kwanoma imuphi inkanyezi sinesithakazelo esikhulu abalandeli, yayiphumula futhi uGregory. Abalandeli wazama ukufunda konke ngempilo yakhe, okuthiwa ashiwo amanoveli akhe, okwakuyinto ngempela. Ngakho, isihloko "Gregory Lemarchal, biography kanye Lara Fabian" kwaba isikhashana inombolo eyodwa kulezi zingxoxo. Singers chasiselwe inoveli, njengoba bebizwa ngokuvumelanayo kakhulu wabheka enkundleni lapho ucula Duet. Kodwa eqinisweni base congenial futhi saba abangane. Lara, wayejabula kakhulu umculi osemusha izwi lakhe nangobuqotho. Kodwa Gregory wayengumdlali emphilweni uthando - kuyinto Karin Ferry.
Karin - intombazane enhle, imodeli, TV umethuli, ilungu version French show "The Bachelor", embozwe ezinsukwini zokugcina zalesi Gregory Lemarchal. Bahlangana ngengozi, basuke oxhumene ezivamile nengcweti. Waphelelwa ifoni Karin uGregory, futhi yena, njengoba esho, ngesikhathi kuphela zensizwa okuthiwa yena. Waba namahloni kakhulu, isipiliyoni kanye namantombazane enkanyezini ekuphumeni kwakungenele. Ekuqaleni, guys nje ngokuthi emuva, wahlangana, ukushintshana izindaba nakho ukubamba iqhaza ngokoqobo show. Futhi ngemva kwezinyanga eziyisithupha, uGregory yavuma ukuthi uthanda Karin. Yaqala kanjalo-ke le nkathi kunazo zonke ekuphileni kwayo Gregory Lemarchal. Abantu abasha wahamba eziningi, waya amabhayisikobho, yaziphatha njengezilo bonke abathandi, kodwa paparazzi ikwenze izimpilo esidabukisayo ababekuso, nokujaha kubo yonke indawo, asolwa ukuthi mbhangqwana undawonye usebenza kuphela PR, ke Ungamlimazi umfana. Gregory ke ngacela umngane photographer ukubamba sicu isithombe futhi wabatshela ukutshela umhlaba ukuthi wathola uthando lwakhe eqoqwe, ukuze bathuthukise impilo yabo, oshadile ukuba Karin.
Ngo-February 2007, e impilo Gregory ngumuntu ukuwohloka abukhali, kwakufanele bonyana enze ngokushesha aye esibhedlela, unqabile ukukhuluma. Kwaze kwaphela izinyanga ezimbili yokwelapha avunyelwe Mashi 30 amnike ekhonsathini zokugcina. Ngemva kwalokho, kwaba sobala ukuthi impilo umculi sika intuthuko futhi wayedinga ukufakelwa wamaphaphu. Wayelethwa ekuqaleni ukulungiselela umsebenzi, uqale ukufuna abanikelayo. Apreli 28, 2007, wenza isitatimende lapho waxolisa ukwesulwa ekhonsathini, umema bonke ukuba umthande futhi umazise ukuphila, ngoba kuyinto enhle. Ngalesi sikhathi, ubuhlungu iba nje babulawa, ukuze aqede ukuhlupheka nelokunika izikhwepha zakho umzimba inzuzo ngaphambi nje kokuba ahlinzwe, 29 Apreli Gregory ngemvume yakhe ibekwe ku-ikhoma yokufakelwa. Kodwa konke kusenjalo 30 Apreli umzimba awukwazi ukumelana imithwalo futhi uGregory Lemarchal, ogama biography isibe isibonelo umzabalazo abanolaka ukuphila, wafa. It kwaba njengendlela ukushaqeka hhayi kuphela umndeni wakhe kodwa futhi ngenxa izigidi abalandeli. May 3, 2007 ku Chambery emngcwabeni Gregory yahanjelwa ezinkulungwane zabalandeli.
Gregory Lemarchal, biography, ogama ukufa namanje shake yami nezikulu yiqhawe yaqashelwa. Ngo-May 4, ngemva impilo ithelevishini kanye nokufa Gregory kwaba eqoqwe 6 million euros ngeminikelo esiKhwameni ekulweni-cystic fibrosis. Abazali bakhe abahlanganyela kulo Isikhwama namuhla kumemori sendodana yakhe. Ama-albhamu amabili posthumous ngabe athengiswe phezu ambalwa kwesigidi, ke Ukugunda uqhubeke ubuke, futhi njalo ngonyaka usuku lokuzalwa Gregory Chambery ibutho abalandeli ukuza bazohlonipha ukuphila kwesikhulu kancane.
Indlela yokusebenzisa Spotify eRussia: isicelo kanye nokubuyekeza yesevisi